BangEa - प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग सफ्टवेयर डाउनलोड
प्रारम्भिक पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
समयबद्ध बजार र पेन्ड अर्डर
बजार र पेन्ड अर्डर
बन्द गर्ने प्यानल
बन्द प्यानल समर्थन कार्यहरू
अर्डर प्यानल थप्नुहोस्
सकारात्मक स्पेस थप्नुहोस्
सकारात्मक थप्नुहोस् धेरै x
सकारात्मक थप सीमा
रिभर्स स्पेस थप्नुहोस्
उल्टो लट x थप्नुहोस्
सीमा जोड्नुहोस् उल्टो
स्वतः खोल्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्
Hedg अन्य प्रतीक
फोरम गृह पृष्ठ
सबै-साइट EA सफ्टवेयर प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन्
EA विशेषज्ञ सल्लाहकार बुद्धिमान स्वचालित व्यापार प्रणाली को संक्षिप्त रूप हो।
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग सफ्टवेयर।
K-लाइन कोणको पूर्ण स्वचालित ट्रेडिंग महसुस गर्नुहोस्
यो EA BANG फोरममा एक साथीले उठाएको प्रश्न हो। वास्तवमा, यो प्रकार्यलाई सूचक बनाउन आवश्यक छैन, किनभने अवस्थित EA ले यसलाई महसुस गर्न सक्छ। यो हासिल गर्न दुई तरिकाहरू छन्। के-लाइनको ढलान के हो? यो N जोडेर बनेको रेखा हो […]
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग EA र स्क्रिप्ट बीचको भिन्नता
EA: प्रत्येक पटक मूल्य उतार-चढ़ाव हुँदा, EA मा कोड एक पटक कार्यान्वयन हुन्छ; स्क्रिप्ट: स्क्रिप्ट रन पछि, कोड एक पटक मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। हामीले भिन्नतालाई सही रूपमा बुझ्नको लागि, EA Bang को श्री ताङले विशेष रूपमा एउटा EA र प्रदर्शन गर्नको लागि एउटा स्क्रिप्ट लेखे, यसको कार्य समय आउटपुट गर्नु हो। […]
ट्रेडिंग सर्भरको आईपी ठेगाना प्राप्त गर्नुहोस्
यो पहिले EA राज्य फोरम मा एक साथी द्वारा उठाएको आवश्यकता हो। उसले बारम्बार व्यापार गर्न हाम्रो प्रोग्रामेटिक EA प्रयोग गर्दै आएको छ, र ट्रेडिंग रणनीति अर्डर ब्रशिंग प्रकारको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि लेनदेन गतिले बारम्बार लेनदेनको रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्छ। उसले सामान्यतया VPS प्रयोग गर्दछ [...]
एउटा EA ले अर्को EA को अर्डरहरू प्रबन्ध गरेर, तपाईंले यो गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा, के तपाईंले त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुभएको छ? AEA को खोल्ने स्थिति राम्रो छ, र BEA को बन्द स्थिति राम्रो छ। यदि यी दुई EAs सँग जोड्न सकिन्छ भने यो उत्तम हुनेछ! सामान्यतया, हामी स्थितिहरू खोल्न र बन्द गर्न 1 EA प्रयोग गर्छौं। यदि म सम्हाल्न चाहन्छु भने […]
फेब्रुअरी 21, 2022
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंगको प्यारामिटर कन्फिगरेसन फाइलको सन्दर्भमा, यो लेख पढ्न पर्याप्त छ
EA को कन्फिगरेसन फाइल कसरी प्रयोग गर्ने? एक प्रयोगकर्ताले बहु-विविध व्यापारको लागि Bang EA को हेजिङ EA प्रयोग गर्दै आएको छ। EA सफ्टवेयरको कार्यहरू निरन्तर समृद्ध हुन्छन्। समय बित्दै जाँदा, त्यहाँ सयौं EA प्रकार्यहरू छन्, त्यसैले स्थानहरू खोल्न र बन्द गर्न केवल स्वचालित प्यानलका सर्तहरू प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, त्यहाँ धेरै […]
फेब्रुअरी 18, 2022
के हराउने रणनीतिहरू उल्टो प्रतिलिपि गर्ने आदेशहरू विश्वसनीय छन्?
सिमुलेटेड ट्रेडिङको अघिल्लो 10 वर्षहरूमा, एक स्थिर व्यापार रणनीतिले स्थिर घाटा बनायो, र प्रक्रियामा, यसलाई यसको सेट ट्रेडिंग रणनीति अनुसार कडाईका साथ कार्यान्वयन गरियो। भविष्यको बजारमा, घाटाको सम्भावना निश्चित रूपमा धेरै उच्च छ, र यो घाटा पनि हुन सक्छ। यदि हामीले व्यापारिक रणनीति पछ्याउँछौं भने […]
फेब्रुअरी 14, 2022
EA व्यापारले स्वचालित रूपमा स्क्रिनसटहरू बचत गर्दछ
नोट: यो लेख www.eabang.com बाट सारियो। यो लेख श्री ताङ द्वारा रेकर्ड गरिएको भिडियो हो। भिडियोहरू हेर्न मन नपर्नेहरूका लागि, तपाईंले लेख पढ्न सक्नुहुन्छ। EA ले अर्डर खोल्दा र बन्द गर्दा स्वचालित रूपमा स्क्रिनसटहरू कसरी लिने? यो प्रकार्य EA सदस्यको अनुरोध हो। उसले सामान्यतया प्रोग्रामेटिक लेनदेन प्रयोग गर्दछ। उनले […]
डे बार र म्याक्रोसाइकल बीचको भिन्नता कसरी बुझ्ने?
भिन्नता मुख्य रूपमा विभिन्न फिक्स डी अवधिहरूमा बार आकारबाट आउँछ। 1-मिनेट चार्ट र दैनिक चार्ट जस्ता तलको चित्रमा देखाइए अनुसार, 1-मिनेट चार्टमा धेरै K-लाइनहरूमा TICK को सानो संख्या मात्र हुन सक्छ। केही अलोकप्रिय प्रजातिहरूको निष्क्रिय समय अवधिमा, 1-मिनेट K-लाइन उतार-चढ़ाव हुन्छ […]
यदि EA ले आदेशहरू बन्द गर्दैन भने मैले के गर्नुपर्छ
1. अर्डर भरिएको छ कि छैन भनी जाँच गर्न ओपनिङ प्यानलमा रहेको "By Open" वा "Sell Open" मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि कुनै नयाँ अर्डर छैन भने, कृपया mt4 र mt5 लगइन गरिएको छ कि छैन, र "Algo Trading" र "DLL आयातहरूलाई अनुमति दिनुहोस्" सक्रिय छ। EA स्थापना 2. यदि त्यहाँ नयाँ अर्डर छ भने, बन्द गरिएका आदेशहरू व्यवस्थित छैनन्, स्थान […]
यो प्रकार्य धेरै प्रतीकहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। समापन प्यानलमा समग्र T/P ट्रिगर भएपछि, यसको नाफाको रकमले यो EA द्वारा सबैभन्दा धेरै एक अर्डरको लागि व्यवस्थित घाटालाई हेज गर्छ, र कति बन्द गर्न सकिन्छ; Pofit>0: दुई हेज गरिएका अर्डरहरूको नाफा ० भन्दा बढी छ; खाता हानि अनिवार्य छ>%: फ्लोटिंग घाटा/ब्यालेन्स>0%।
फोरम नवीनतम विषयहरू
हेजिङ EA v3.8.8.4 डाउनलोड र प्रकार्य विवरण अद्यावधिक गर्नुहोस्
बहु-प्रतीक प्यारामिटरहरू, यो5महिनादेखि चलिरहेको छ, र नाफा 50 छ
हेजिङ EA v3.8.8.3 डाउनलोड र प्रकार्य विवरण अद्यावधिक गर्नुहोस्
प्यानल बन्द गर्नको लागि समग्र S/P सेटिङ
ब्याकटेस्टिङ धेरै ढिलो छ।
© 2022 BangEa। WordPress र प्रयोग गरेर निर्मित ColibriWP विषयवस्तु .